काइँला काका…. « Salleri Khabar
(Sunday 9th August 2020)
प्रकाशित मिति : 26 October, 2019
काइँला काका घर नफर्केको पनि वर्षौँ भएछ । तसर्थ घर अँध्यारो भएको वर्षौँ भएछ । जुनकिरी हराएको घर फेरिएको छैन । घरको अनुहारमा चमक छैन । बार्दली रोइरहेको छ । पिँढी काइँला काकाको पर्खाइमा छ । आईते, मेरा काइँला काकाको छोरा । आईते छ वर्षको हुँदा उसकी बहिनी ‘रमा’ दुई वर्षकी थिई । आईते पाँच वर्षको हुँदा काइँला काकालाई जबर्जस्ती आन्दोलनमा लिए- दुई थान बन्दुक बोकेका टाउकोमा रातो रिबन बाँधेका पाँच/छ जनाको हुलले ।
जेठको टन्टलापुर घाम । खेतबारीमा गहुँ पाक्ने समय । किसानहरूलाई तिर्खा लाग्दा पानी पनि भन्न नपाइने समय । गैरी खेत । हजुरबाले तास हारेर बेचेको सुनिन्छ आजभोलि । पछि हजुरआमाले बाख्रा बेचेर फेरि किनेको खेत । दश मुरी गहुँ फल्ने खेत । दिनभरि गहुँ लोएर(काटेर) साँझको अँध्यारोमा पिठ्युँमा गहुँको भारी बोकेर घर फर्किएका थिएँ- काइँला काका र काकी । पल्लो घरमा आईते, आईतेकी बहिनी रमा अनि वल्लो घरमा म बसेका थियौँ । मेरा बा र आमा कामको खोजीमा भारत गइसकेका थिए । मेरो लालनपालन र शिक्षा काइँला काका र काकीको हातमा सुम्पिएर बाले गाउँ छोडेका हुन् ।
काइँला काकाले गहुँको भारी टाँण (पीढी )मा बिसाएका के मात्रै थिएँ । सानो सिकारीले बोक्ने जत्रो झोला बोकेका, बन्दुक भिरेका र टाउकोमा रातो रिबन बाँधेका एक हुल मान्छेको भिड पीढीमै आइपुग्यो । आँखै अगाडी काइँला काकालाई सुराकीको आरोपमा धकेली धकेली कुटेको देखियो ।
काइँला काकाले गहुँको भारी टाँण (पीढी )मा बिसाएका के मात्रै थिएँ । सानो सिकारीले बोक्ने जत्रो झोला बोकेका, बन्दुक भिरेका र टाउकोमा रातो रिबन बाँधेका एक हुल मान्छेको भिड पीढीमै आइपुग्यो । आँखै अगाडी काइँला काकालाई सुराकीको आरोपमा धकेली धकेली कुटेको देखियो । उसै त रात पर्दै थियो । त्यसै माथि काइँला काकालाई आन्दोलनमा लगेपछि मेरो, आईतेको, सानी बहिनी रमाको अनि काकीको जिन्दगीमा सामूहिक रात पर्‍यो । आज सम्म रातै परेको छ । आज सम्म बिहानी भएको छैन । न त काइँला काकाको ज्युँदो शरीर हामी सँग छ न त कुनै रैबार ( खबर) ।
काइँला काकाले घर छोड्नै लाग्दा काइँली काकीले भनेको याद छ । उहाँले भन्नुभएको थियो, “आईतेका बाको कुनै गल्ती आछिन (छैन) । दिसपुरी (दिनभरि) हामी दुई जनाले गहुँ लोयाऔ( गहुँ काट्यौँ )। न त ती काहीँ (कहीँ) दोकान गयाका छन्, न त काहीँ होटेल । उँथा काँ बाटी( अनि कहाँबाट) ती सुराकी हुँदा हुन् ? एक चोटिलाई छाडिदेऊ प्रभु ! मेरो आईतेका बुबालाई । आन्दोलनमा लिन्याई ( लिने नै) भया बरु मुलाई लैजाऊ । तीनलाई छाडिदेऊ (छोडिदेऊ) “।
“तँ धेरै नबोल । हेर्दा बोक्सी जस्ती छ । अझै लोग्नेकै तिर लाग्छेस् । सक्काईदिऊ ? आगो लगाईदिऊ तेरो घरमा ?” हुलको सबभन्दा मोटो मान्छे बोल्यो । आईते र म सानै थियौँ । केही बोलेनौ । त्यही दिन देखि हाम्रो जिन्दगीमा ठुलै म्याग्नीच्यूडको भुईँचालो गयो । अहिलेसम्म त्यसैको पराकम्प जारी छन्, गइरहेका छन् । काकीलाई घरमै छोडेर आईते र म ती मान्छेको पछाडि पछाडि कुद्यौँ । गाउँको प्रवेश द्वारमा गेट बनाएको थियो । त्यो गेट बनाउन लगाउने पनि तीनै आन्दोलनकारी हुन् भन्ने हल्ला सुनिन्थ्यो । त्यहीँ गेटमा काइँला काकालाई मज्जाले डोरीले बाँधेर पशु सरह पिटेको दृश्य देख्दा हृदय आधा भए जस्तो भयो । आँसुले आँखाको डिल छोडिसकेका थिए । आईतेलाई फर्केर हेर्दा उसको आँखामा महासागर देखिन्थ्यो । चट्टानबाट तप्प तप्प खसेका पानीका थोपा जस्तै खसिरहेका थिए- आईतेको आँखाबाट आँसु ।
आमाले छोडेर गएको बचेराको गुँड जस्तो भयो हाम्रो घर । सधैँ धपक्कै बलिरहने हाम्रो मैनबत्ती निभ्यो । हजारौँ माइल सम्म बास्ना दिइरहने हाम्रो फुल ओइलायो । उज्यालो दिनलाई बिदाइ गर्दै हाम्रो सूर्य अस्तायो । काकीको खुसीको इन्द्रेणी हरायो । त्यो दिन हामी खाना नखाएर अघायौँ । रातभर निदाए जस्तो नाटक गर्‍यौँ ।
त्यहाँबाट काइँला काकालाई अर्कै गाउँ जाने बाटो हुँदै लग्यो । अँध्यारो रात । हामीले आँखाले भ्याउने जति हेर्‍यौ । पछि हामी घर फर्कियौँ । यता घरमा रमा र काकी एक्ली थिइन । हामी आयौँ । म आईतेभन्दा तीन/चार वर्ष जेठो । करिब करिब बुझ्ने भइसकेको थिएँ । घरमा अब काकी, म, आईते र रमा मात्रै रह्यौँ । आमाले छोडेर गएको बचेराको गुँड जस्तो भयो हाम्रो घर । सधैँ धपक्कै बलिरहने हाम्रो मैनबत्ती निभ्यो । हजारौँ माइल सम्म बास्ना दिइरहने हाम्रो फुल ओइलायो । उज्यालो दिनलाई बिदाइ गर्दै हाम्रो सूर्य अस्तायो । काकीको खुसीको इन्द्रेणी हरायो । त्यो दिन हामी खाना नखाएर अघायौँ । रातभर निदाए जस्तो नाटक गर्‍यौँ ।
दिनहरू बित्दै गए । हाम्रा काइँला काकाको खबर आउनै छोड्यो । कसैको केही नलागेपछि काइँला काकाको पिडाको घाउ बिस्तारै सुक्दै गयो तर खाटो आज सम्म पनि छ ।
रमाले त बाको अनुहार सम्म राम्ररी देख्न पाइन । आजभोलि बुबाको मुख हेर्ने दिनमा नागरिकतामा टाँसिएको फोटो हेर्छे । आफ्नो काम गरिरहेको एक मजदुरलाई जब सुराकीको आरोप लगाएर कुट्दै कुट्दै लग्यो । हो, त्यही दिनबाट शुरु भयो- अन्धकार जिन्दगी । कहालीलाग्दो अँध्यारो यात्रा । थपिँदै गयो कलिलो काँधमा जिम्मेवारीको भारी । हाम्रो परिवारको मोटरको अगाडीको पाङ्ग्रो म भएको छु । पछाडिको पाङ्ग्रो आईते भएको छ र हाल सम्म गुडिरहेछ मोटर- काकीको सहयोगले । टाढैबाट भए पनि बा र आमाको सपोर्टले । अझै भनौँ बाध्यताको इन्जिनले । काम गरेर गल्याई लाग्याका तक ( थकाई लागेको बेला) उहिल (उहिले) काइँला काका भन्नुहुन्थ्यो, “कति काम हर्नु (गर्नु) ? जति काम हर्या पन (गरे पनि ) लास्टमा छातीमी बानीकन मणापोल्ना कोही लिन्या नाई । नाङ्गाई आयौँ र नाङ्गाई झान्या हौँ “। ( जति सुकै काम गरे पनि अन्तमा मसानघाटमा नाङ्गो जानुपर्छ । नाङ्गो आयौँ धर्तीमा र नाङ्गै जाने हो ।) त्यसैले हाम्रो यात्राको अन्तिम गन्तव्य पनि मसानघाट हो । सायद हाम्रा काका पनि त्यतै भेटिने हुन कि ?
आज म क्याम्पस पढ्छु । आईते प्लस टु पढिरहेको छ । रमा यो वर्ष दश क्लासको जाँच दिने हो । काकी अझै किसान हुनुहुन्छ । काकाले गर्ने सबै काम काकीले गर्नुहुन्छ । मेरा बा आमा भारतमै छन् । दिनभरि ज्याला मजदुर गरेर हाम्रो परिवार पाल्ने र हामीलाई पढाउने गरिदाख्नुभाछ तर काइँला काका….. । काइँला काकाको खबर अज्ञात छ । आजकाल म सुन्छु-रेडियोमा । मेरा काइँला काकालाई आन्दोलनमा लिने टोलीको प्रमुख कमान्डर यो देशको मन्त्री छ । उसको घर काठमाण्डौं तिर छ । उसका छोराछोरीहरू विदेशमा पढिराखेका छन् । मेरा काइँला काकालाई डोरीमा बाँधेर बाँसको लौरोले बजाउने पल्ला गाउँको गोरे मन्त्रीको पिए छ । त्यो पिए अनि आईते र ममा एउटै फरक छ । त्यो पिएले पार्टीको झोला बोक्छ । हामी जिम्मेवारीको झोला बोक्छौँ । उसले पार्टीको झन्डा बोक्छ । हामी देशको झन्डा बोक्छौँ । उसको घरमा “कुकुर देखि होसियार ! ” लेखिएको छ भने हाम्रो घरमा ” पाहुनालाई स्वागत छ ! ” लेखिएको छ । उसले कापीको पानामा हस्ताक्षर गर्छ, सही च्याप्छ । हामी लोडो, पडोमा ( सिलौटोमा) नुनको सही च्यापेर फापरको रोटी, कोदोको रोटीले ज्यान धान्छौँ । उसको घरमा राता किताबहरू, पुरानो खुकुरीको रातो दाप अझै भेटिन सक्छ । हाम्रो घरमा आईतेको र मेरो हरियो पासपोर्ट भेटिन्छ । त्यही पासपोर्ट भित्र देश बोकेर लानु छ- समुन्द्र पारी । काइँला काका घरमा नअटे पनि उहाँको प्रेम र स्नेह हाम्रो हरियो कलरको राहदानीमा अट्नेछ ।
हाम्रो घरमा आईतेको र मेरो हरियो पासपोर्ट भेटिन्छ । त्यही पासपोर्ट भित्र देश बोकेर लानु छ- समुन्द्र पारी । काइँला काका घरमा नअटे पनि उहाँको प्रेम र स्नेह हाम्रो हरियो कलरको राहदानीमा अट्नेछ ।
आँखै अगाडी काइँला काकालाई आन्दोलनमा लगेकै दिन देखि काकी नै मेरो काइँला काका हुन् । काकालाई लगेदेखि कैयौँ उस्तै सालहरू आए । कैयौँ उस्तै चाडबाड आए। कैयौँ पटक गैरी खेतमा गहुँ फल्यो । अहँ मेरा काइँला काका अझै आएनन्, अझै पर्केनन् । सायद काइँला काकाले घर फर्किने नक्सा भेटेनन् कि ! आज यहीँ सोचेर चित्त बुझाउँछौँ हामी । हाम्रो काकाको आन्दोलनले हाम्रो घरको अनुहारमा घाम नझुल्के पनि देशको अनुहारमा घाम झुल्किराखोस् । काकाको अपहरणले हाम्रो घर बत्ती मुनीको अँध्यारो भए पनि सबैको घरमा बत्ती पुगोस् । काकीले अझै अँधेरी रातमा पँधेरी खोलाको पानी बोक्नु परे पनि सबैको मुखमा शुद्ध पानी पुगोस् । आईतेले बा गुमाए पनि देशले बा नगुमाओस् । रमा र मैले घरमा काइँला काका नदेखे पनि देशमा शान्ति देख्न पाइयोस् । हाम्रो प्रेमको फुल ओइलिए पनि देशमा शान्तिको फुल फुलिराखोस् । तिहारमा हाम्री फुपूको मखमली फुलको बोट ढले पनि देशको आस्था र विश्वास नढलोस् । हाम्रा काइँला काका हराए पनि देशको अनुहार हेर्ने ऐना नहराओस् । देशको विकासको बाटो नहराओस् । आईते र मैले हरियो पासपोर्ट बोक्नु परे पनि देशमा सधैँ हरियाली होस् । हाम्रो जिन्दगी उजाड भइगए पनि देश उज्यालो होस् । हामी काइँला काका हराएको परिवारबाट या अझै भनौँ देश हराएका मान्छेहरूको तर्फबाट । यहीँ शुभकामना । देश हुनेहरूलाई !
हाम्री काकी गीदाङ्गी /गिदौड्या ( देउडा गीत भन्ने मान्छे ) पनि हुन् । आजकाल मेला, महोत्सव र पर्वमा काइँला काकाको वियोगमा यस्तो गीत भन्नुहुन्छ ।
“पल्ला गाउँ नेताका घर तस्बिर टाँस्याका छन्
भित्री मन रोयाको रोयै दन्त हाँस्याका छन् !
उति राम्रो माया जाल कैई धर्ती गयो हो
साई दुरै म पन दुरै, यसो क्या भयो हो !”
बिष्णु पौडेलका पिएसओलाई कोरोना संक्रमण
२५ साउन, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव बिष्णु पौडेलको अंगरक्षक (पीएसओ)लाई कोरोना संक्रमण भएको
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दिनप्रतिदिन भयावह बन्दै
नेपालमा थप ३८० जनामा कोरोना संक्रमण
स्वास्थ्य मन्त्रालयका चारजना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि